Akashamisika mutyairi akatarisa zvinonyadzisira mushure mokunge achiita zvisina kukodzera mutauri wechitima mu UK - xnxx - TELES RELAY
HOME » mwe Imwe mutyairi akashamisika achitarisa zvinonyadzisira mushure mokunge achiita zvisingabvumirwi pahurukuro-huru yechitima mu UK - xnxx
Iko kushamisika kwakaona mutyairi achiona zvinonyadzisira mushure mokunge akangoerekana achichitamba mu UK muchechetiki-xnxx
Chiitiko chisingazivikanwi chakaitika mushure meumwe wevatasvi, Paul Brunton, tweeted zvinyorwa zvinyorwa zvehurukuro dzaifamba pachitima chinosangana neWandsworth kunaClapham muLondon munguva ichangopfuura.
Chikwereti Chekuita: Twitter
Zvinogona kunyadzisa kutarisa zvinonyadzisira, asi kana zvikaitika Muchitima chakazara nevanhu uye iwe uri mutyairi, zvinhu zvinogona kuva zvizere.
Ndizvo zvakaitika kune mutyairi wezvitima muUnited States uyo akaita kuti vashambadzi vake vaseke uye vakatarisa kwaari vakashamiswa mushure mokutamba chii. Yakanzwika sekutinhira kwekaona zvinonyadzisira pamusoro pekutaurirana.
Chiitiko chisingazivikanwi chakaitika mushure meumwe wevatasvi, Paul Brunton, tweeted zvinyorwa zvishoma zvemashoko akaparidzirwa pachitima cheWandsworth-to-Clapham. muLondon munguva ichangopfuura. Tweet yakakurumidza ikava nehutachiona nevashandisi vakawanda veIndaneti vachipa majee uye vanoratidzira mhirizhonga.
"My tube driver inotarisa zvinonyadzisira paanosiya tannoy system ...," akadaro Brunton.
Izvo zvikamu zvakaratidza vazhinji vanofambisa kuseka uye vachishamisika pamusoro pezvinobva mumhanzi.
Mukadzi anobvunza, "Izvi zvinobva kune mutyairi here?", Kune mumwe anopindura achiti: "Aiwa, iyo foni yeumwe munhu."
Duo racho rinoputika riseka sezvo mhere-mhere inonyadzisa ichiri kuramba ichiita mumudzidzisi. Pauro akabva adzorera zvakare vhidhiyo yake ndokuisa Transport yeLondon (TfL), nezwi rinoti: "Inoshamisa Multitasking Here". TfL akapindura, "Zvakanaka zvangu, neruremekedzo, kwete mumwe wezvitima kana vatyairi vedu", pamwe chete ne emoji inoseka misodzi.
Mutsamba, South Western Railways yakati: "Nhungamiro yedu ndeyekudzivisa zvinhu zvisina kukodzera, kusanganisira zvinonyadzisira. , paIt-Wi-Fi mairi uye pachiteshi chezvitima. "Tiri kuongorora chiitiko ichi kuti tione kuti mashoko aya akaparidzirwa sei mubasa redu. "Chiitiko chezuva ranhasi hachigamuchirwi zvachose uye tinokumbira ruregerero kune vatengi vedu."
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.news18.com/news/buzz/driver-plays-pornographic-audio-on-train-loudspeaker-in-uk-passengers-amused-2143915.html
Alabama inouraya mhondi mumwe musi mushure mokubvisa pamuviri kubvumirwa - New York Times